सचिवालय बैठक | Ratopati
नेकपा सचिवालय बैठक : मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल हुँदै access_timeअसोज ६, २०७७
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मंगलबार सचिवालय बैठक बस्दैछ ।बैठक सोमबार नै बस्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक मंगलबार दिउँसो १२: ३० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो । आइतबारबाट सुरु भएको बैठ...
आजको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित : भोलि बालुवाटरमा नै बस्ने access_timeअसोज ५, २०७७
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक मंगलबार दिउँसो १२ः ३० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो । पेरिसडाँडामा आइतबारबाट सुरु भएको बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन...
नेकपा सचिवालय बैठक : सबै आ–आफ्नो अडानमा यथावत, कसरी जुट्ला सहमति ? access_timeबैशाख १७, २०७७
काठमाडौं । अध्यादेश प्रकरणले पार्टीमा उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिबारे छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हेडक्वाटर मानिने नौ सदस्यीय सचिवालय बैठक आज (बुधबार) साँझ बस्दैछ । अघिल्लो सोेमबार सरकारले पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश...
बालुवाटार बैठक : सरकारको न खुलेर आलोचना, न त मनैदेखि समर्थन ! access_timeचैत २६, २०७६
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा छलफल गर्नैपर्ने अनेक विषय छन् । परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि, यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाहेकका सबै विषय गौण भइदिएका छन् । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको समय...
वामदेवका विषयमा सचिवालयमा छलफल हुदैन : वरिष्ठ नेता खनाल access_timeचैत ५, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बुधबार बस्दैछ । बुधबार अपरान्ह ४ बजेका लागि तय भएको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । नेता खनालका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्व...
नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित access_timeमाघ २६, २०७६
काठमाडौँ । पार्टी एकताका बाँकी कामलगायतबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान ११ बजे बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो । प्रधानमन्त्रीले श...
केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा पास गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै access_timeमाघ १४, २०७६
काठमाडौ । केन्द्रीय समिति बैठक अघि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ । नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक माघ १५ गते सुरु हुँदैछ । त्यसअघि मंगलबार अपरान्ह ४ बजे सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुटार...
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी access_timeमाघ ५, २०७६
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखको विषयमा पार्टीको तर्फबाट औपचारिक निर्णय लिन नेकपा सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । यसअघि नेता अग्नि सापकोटाको नाममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच लगभग सहमति भएकोमा सचिवालय बैठकले औपचारिक...
नेकपाको ९ सदस्यीय ‘हाई कमान्ड’मा अब बामदेव मात्रै संसद बाहिर access_timeपुस २०, २०७६
काठमाडौँ । माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दल नेकपाले पुस १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमार्फत आफ्नो पार्टीका १६ उम्मेदवार तय गर्‍यो । लामै रस्साकस्सीबीच १६ जना उम्मेदवार छानेको नेकपाले यसअघि अवसर नपाएका र पाउँदा पनि जनताले नपत्याएका व्...
केन्द्रीय समिति र सभामुखबारे छलफल गर्न नेकपा बैठक access_timeपुस २०, २०७६
काठमाडौँ । केन्द्रीय समिति बैठक र सभामुख चयनका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)को सचिवालय बैठक बसिरहेको छ । बिहान नौ बजेबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा जारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक निर्धारित समयमा बस्ने वा केही दिनपछि...
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छनोट गर्न नेकपाले बोलायो बैठक access_timeपुस १६, २०७६
काठमाडौँ । सभामुख र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक पुस १७ गते ४ बजे बस्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । महासचिव पौडेलका अनुसार भोलिको बैठकमा विशेष...
नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुखबारे टुङ्गो लगाउन सकेन access_timeपुस १३, २०७६
काठमाडौँ । सभामुख पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्न बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक अनिर्णित भएको छ । आइतबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सभामुख चयन गर्न नसकेको हो । बैठकपछि महासचिव विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएअनुसार सभामुख...
नेकपा सचिवालय बैठक : स्थायी समिति बैठकका लागि ५ एजेण्डा तय access_timeमंसिर २९, २०७६
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठकका लागि एजेन्डा तय गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठकका लागि पाँचवटा एजेन्डा तय गरेको जानकारी दिएका हुन् । श्रेष्ठका ...
नेकपा सचिवालय बैठक : उपनिर्वाचनबारे रिपोर्ट पेश गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन access_timeमंसिर १८, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भर्खरै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शनबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भएको छ । आज पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायाणक...
मन्त्रीबारे टुङ्गो लगाउन नेकपा सचिवालय बैठक बोलाइयो access_timeमंसिर ४, २०७६
काठमाडौँ । नयाँ मन्त्री चयनबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार बिहान बस्दैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साढे १२ बजे बैठक बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ...
नेकपाको सचिवालय बैठक सरेको सर्‍यै access_timeकात्तिक २९, २०७६
काठमाडौँ । मन्त्रिहरुको हेरफेरबारे निर्णय गर्न बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अनिश्चित भएको छ । यसअघि बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने भनिएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार शुक्रबार सचिवालय ...
भारतसँग वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्ताव तयार गर्दै सरकार access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न लागि औपचारिक प्रस्तावको तयारी शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तयारी बारे सचिवालय सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका हुन् । बैठकमा भएको...
नेकपा सचिवालय बैठक : अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा बोहरा, सल्लाहकार कमिटीमा बडाल access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनीक एकीकरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी विभिन्न केन्द्रीय निकायहरुको अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले सांगठनीक एकीकरणको बाँकी ...
नेकपा सचिवालय बैठक : मन्त्रीबाट को–को होलान् ‘आउट’ ? access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीका बीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सोमबार बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार भएको छलफल...
प्रदेश प्रमुखको नाम टुङ्ग्याउँदै नेकपा access_timeकात्तिक १८, २०७६
सातैवटा प्रदेश प्रमुखको नाम टुङ्ग्याउन नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा शुरु भएको छ । आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी प्रदेश प्रमुखहरुहरुको नियुक्तिको तयारीमा थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक पछाडि सारेर नेकपाको सचिव...